बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंश र सुर्खेतमा ज्वरोको प्रकोप - Naya Patrika
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सर्पदंश र सुर्खेतमा ज्वरोको प्रकोप
अर्जुन अधिकारी, काठमाडौं | साउन ३१, २०७४
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि औषधि मौज्दात पर्याप्त रहेको र स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि देशका चार भागमा विपत् व्यवस्थापन कमिटी ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ परिचालन गरिसकेको छ । सिरहा र सप्तरी (कोसी आसपास) हेर्ने गरी लहानमा केन्द्रित भएर एक टोली थप परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै समस्या आउन नदिन उच्च सतर्कतासहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली सम्बन्धित क्षेत्रमा परिचालन गरेको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए । ‘देशैभरि आवश्यकअनुसार औषधि रहेको र सबै स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा रहेको खबर जिल्लाबाट प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सर्पदंशको त्रास बाढी प्रभावित सबै जिल्लामा देखिएको छ । सर्प बस्ने दूलोमा पानी पसेका कारण सर्पले ओभानो ठाउँ खोज्दै हिँड्ने क्रममा घरटहरामा पुग्ने भएकाले मानिसलाई टोक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । डा.श्रेष्ठले सबै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार सर्पदंशको औषधि भएको र सकिएको अवस्थामा तत्काल पुर्‍याउने बताए ।
बिरामी हुन नदिने उपायमा मन्त्रालय
स्वास्थ्यकर्मीको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी, खानेकुरा, एकसरो कपडाको उचित व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ । ‘बाढी प्रभावित क्षेत्रका मानिस भीडमा बसेका छन् । यसले रुघाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, आउँ, हैजा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले ठूलो भीडलाई फरक–फरक स्थानमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । अहिलेको ठूलो समस्या भनेको लामखुट्टेको नियन्त्रण र सर्पदंशबाट बचाउनु रहेको श्रेष्ठले बताए ।
यस्तो छ स्वास्थ्यको अवस्था
डा. भीम आचार्य, इपिडिमियोलोजी
तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा
बाँकेको राप्तीसुनारी र खजारी गाउँपालिकामा बढी नागरिक प्रभावित भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले आवश्यकताअनुसार औषधि र पोषण वितरण गरेका छन् । सप्तरीका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि उच्च सतर्कताका साथ २४सै घन्टा तयारी अवस्थामा बसेको छ ।
महोत्तरीको भंगहा गाउँपालिकाको मुसहर बस्तीमा झाडापखालाले एक व्यक्ति सिकिस्त भएको जानकारी पाएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट गएको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ले आवश्यक उपचार गरेर सुरक्षित स्थानमा सारेको छ । बर्दियामा सामान्य पानी घटेको छ । सो क्षेत्रमा बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराइएको छ । झापाको १२ सय बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा राखिएको छ । सर्लाहीको ७५ प्रतिशत भूभाग डुबानमा छ । चारवटा स्वास्थ्य संस्था डुबेका छन् ।